राम्रो नियम प्राप्त गर्न दिमागमा राख्नको लागि १० नियमहरू। | क्रिएटिव अनलाइन
विक्की | | ग्राफिक डिजाइन, ट्रिक्स, धेरै
Un डिजाइन प्राप्त गर्नका लागि सौंदर्य र वैचारिक अवस्थाहरू पूरा गर्नुपर्दछ राम्रो टर्निंग, सधैं यसको उद्देश्य मनमा राख्दै।
एक डिजाइन राम्रो वा नराम्रो हो भनेर धेरै डिजाइनरहरूको अनुभव र अध्ययनबाट स्थापित कानूनहरूमा आधारित हुन्छ, राम्रो परिणाममा योगदान पुर्‍याउने कानूनहरू या त त्यो कानूनको पालना गरेर वा भंग गरेर। त्यहाँ नियमहरू भ be्ग हुने छन् तर यसको लागि, हामीले पहिले उनीहरूको कार्य बुझ्नु पर्छ।
यी १० नियमहरू जुन हामी तपाईंलाई तल भन्छौं, उत्तम परिणामको लागि राम्ररी परिभाषित मापदण्ड अन्तर्गत स्थापित गरिएको छ।
सँधै कार्य गर्नुहोस् एउटा उपाय, एक अवधारणा जुन तपाईंको प्रोजेक्ट वरिपरि घुम्छ। यसका साथ तपाईले निश्चित गर्नुहुनेछ कि तपाईको सबै डिजाइनले तपाईले खोजिरहनु भएको कुराकानी गर्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको संरचनाको सबै तत्वहरूले तपाईंको विचारमा योगदान दिन्छ। सजावटको लागि सजावट नगर्नुहोस्, कि प्रत्येक तत्व किनभने यो छ तपाईंको डिजाइनको लागि आवश्यक.
तपाईको डिजाईनको ठाउँको बारेमा सोच्नुहोस्, कि कुनै पनि ग्राफिक टुक्राहरू नभएका क्षेत्रहरू बाँकीका लागि आवश्यक छन् रचना। खाली ठाउँहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ, भरिएको छैन।
पाठहरू पनि तत्व हुन्, तिनीहरूलाई छविको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्, तिनीहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईंले यसको पढ्न योग्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
डिजाईन तपाईका लागि होइन, यो अरूको लागि हो। हामी कुन उद्देश्यका लागि डिजाइन गर्छौं, लक्ष्य के हो र के हो भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ सन्देश हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौं.
कन्ट्रास्ट सिर्जना गर्नुहोस्, यसले ल्याउँछ दृश्य ताल। तपाईं केहि तत्वहरूमा सामेल हुन र अरूलाई अलग गरेर र color र विभिन्न फन्टहरूको प्रयोगद्वारा फरक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
सबै विकल्पहरू तपाईले आफ्नो डिजाइनको बारेमा बनाउनु भएको छ स्पष्ट उद्देश्य। कहिलेकाँही यो जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि हामीहरूको पक्षहरूलाई हामीले मन पराउने केही पक्षहरू कसरी त्याग्ने भन्ने बारेमा हाम्रो विचार राम्रोसँग संचार गर्ने।
तपाईंको आँखाहरूसँग कसरी नाप्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाँही त्यस्ता तत्वहरू हुन्छन् जुन हाम्रो गणितको सूत्र भन्दा बढी बुझ्नु आवश्यक पर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि हामी बारम्बार सर्कलहरू र उही साइजको वर्गहरू राख्दछौं भने सर्कल सानो देखिन्छ। हामी यसलाई दृश्यात्मक रूपमा हल गर्न सक्दछौं सर्कलहरूलाई केही ठूलो बनाएर ती वर्गहरू जत्तिकै आकार देखा पर्दछन्।
यो प्रवृत्ति पछ्याउन ठीक छ, तर सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हाम्रो डिजाइनले निर्धारित उद्देश्यहरू पूरा गर्दछ र ती वर्तमानमा नहुन सक्छ। प्रवाह तोड्नु पनि नवीन हुन सक्छ।
अन्तमा, कहानी समीक्षा गर्नुहोस् तर यसको प्रतिलिपि नगर्नुहोस्। नडराउनुहोस् तपाईंको डिजाईनमा सर्न, प्रयोग गर्न र सीमा तोक्न।
कानून तोड्न सकिन्छ, तर कहिल्यै बेवास्ता गरियो। - डेभिड जिरी, टाइपोग्राफर र लेखक।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » राम्रो डिजाइनका लागि १० नियमहरू